बाढीले बाह्रबिसे–ताताेपानी जोड्ने पुल बगायाे- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
बाह्रबिसे बजारबाट सीमाक्षेत्रसँग सम्पर्क टुट्यो
भाद्र ३, २०७५ अनिश तिवारी
बाह्रबिसे (सिन्धुपाल्चोक) — शुक्रबार रातिको वर्षाले धकेलिएको पुलमा साँधीखोल्चा थुनिदाँ बाह्रबिसे–ताताेपानी जाेड्ने पुल बगाएकाे छ । शनिबार राति पुल बगाए पछि बाह्रबिसे देखि ताताेपानी सीमासितकाे सम्पर्क टुटेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०८:३२
आइतबार बाह्रबिसे नगरपालिकाको बाह्रबिसे र खुर्सानीबजार जोड्ने पुल भीरकुना र कोसिनडाँडा हुँदै आउने साँधीखोल्साले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । पुलमा ठूला ढुंगा आए पछि खोला थुनिएर बजारमा पसेको थियो । बेलुकी १० बजेतिर पुल बगाएपछि सबैतिर भागभाग बनाएको स्थानीय राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
‘भीषण वर्षासगै साँधीखोल्सा थुनिएर बेलुकी ठूलो आवाज आएको थियो,’ आफ्नो पसलभित्रै लेदो र भल पसेपछि सफा गरिरहेका राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि सडकमा खोला बग्यो अनि बगर बन्यो, डरले कतिपय झोलीतुम्बा कसेर भागे ।’ उनले बजारक्षेत्रभर लेदो पसेर नदी बनेपछि बजारभर हाहाकार मच्चिएको बताए । तीन इन्च उता सरेको पुलको स्लापसंगै लेदो सबै साँधीखोल्साले बगाएर भोटेकोसी छेउमा थुपारेको छ । जसले कोसी थुनिने सम्भावना बढेको स्थानीयको भनाई छ ।
भीरकुनाबाट झरेको पुरा पहिरो यहाँ आइसकेको छैन्, त्यसैले जोखिम झन् बढ्दै छ । बजारका अधिकांश पसलमा भित्र पानीको बहाव पसेर क्षति पुर्‍याएको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीय पसलभित्र पसेका हिलो पन्छाउन र हिलोमै फसेका सवारीसाधन निकाल्न व्यस्त छन् । साँधीखोल्सा वरीपरी रहेका झण्डै ६ घरमा अत्यधिक क्षति पुगेको छ । छेउका ४ घर उच्च जोखिममा छन् ।
सडकमा गिर्खा, बालुवा र हिलोले क्षतिग्रस्त बनाएपछि एक्जाभेटरबाट पन्छाउने प्रयास भइरहेको छ । नदि छेउको वरीपरीका संरचना तहसनहस बनाउन थाले लगत्तै भोटेकोशीको सतह बढेपछि स्थानीयमा त्रास फैलिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नगरक्षेत्रभर बाढी र पहिरोको त्रासले कोलाहल मच्चाउन थालेपछि प्रहरीलाई चौकन्ना बनाइएको इलाका प्रहरी बाह्रबिसे प्रहरी निरीक्षक यादव थापा क्षेत्रीले बताए । ‘बजारक्षेत्रमा यस्तो घटना घटेपछि सबैलाई सर्तक गराउने कार्यमा अग्रसर भएका छौ, सुरक्षा र उद्धारको लागि प्रहरी तयार छन् ,’ उनले भने । उनले भौतिक क्षतिको तंथ्याक संकलन भइरहेको बताए ।
ढुकुर र काग
भाद्र ३, २०७५ देवेन्द्रप्रसाद उप्रेती
काठमाडौँ — काग काँकाँ गरेर कराउँदै थियो । ढुकुर आफ्ना अण्डा छोपेर बसेको थियो । कागको आवाज सुनेर ढुकुरलाई दिक्क लाग्यो । उसलाई भोक लागे पनि उडेर अन्त जान सकेको थिएन । ऊ कोइलीको आवाज सुन्दा आनन्द मान्ने गथ्र्यो । आज कागको आवाजले चाहिँ उसलाई ज्वरो आएजस्तो भयो ।
ढुकुरले मनमनै भन्यो, ‘अस्ति भर्खर मेरा दुइटै अण्डा त्यो कागले खाइदियो । अब त त्यो पल्किसकेको छ । मैले अण्डा छोडेर हिँडेँ भने त्यसले खाइदिन्छ । अब यी अण्डालाई कसरी बचाउने होला ?’
आकाश कालोनीलो भएको थियो । ठूलो हावाहुरी आउने सम्भावना देखिएको थियो । ढुकुरले यसो आकाशतिर आँखा लगायो । त्यहाँ पनि उसले खतरा नै देख्यो । तर, ऊ निराश भएन । उसले धैर्य गर्दै भन्यो, ‘हे भगवान्, मलाई बचाऊ । मलाई बाँच्ने र बचाउने शक्ति देऊ ।’
अचानक त्यही समयमा काग उड्दै आयो । त्यो कागलाई देखेर ढुकुर झन् आत्तियो । काग उड्दै आएर ढुकुर भएको हाँगामा बस्यो । कागले भन्यो, ‘साथी हामीलाई त हावाहुरीले उडाउँछ जस्तो छ । के गर्ने होला ? तिमीलाई म कसरी सहयोग गरूँ ? तिम्रो गुँड र अण्डाको सुरक्षा गर्नुपर्ने होइन त ?’
कागका कुरा सुनेर ढुकुरलाई अचम्म लाग्यो । उसले भन्यो, ‘तिमी मेरा अण्डा खान आएका त होइनौ ? तिमी जाऊ, मेरो सुरक्षा म आफैं गर्छु ।’ढुकुरको कुरा सुनेर कागलाई अचम्म लाग्यो । सहयोग गर्न खोज्दा पनि स्वीकार गर्दैन । कागले मनमनै सोच्यो, ‘जमाना नै खराब छ । राम्रो कुरा गर्दा पनि त्यसैलाई नराम्रो रूपमा लिन्छन् ।’ आकाश थर्किन थाल्यो । जोडसँग हावा पनि चल्न थाल्यो । रूखका हाँगा मज्जाले हल्लिन थाले । कागले ढुकुरको गुँडलाई चुच्चाले समायो । उसले आफ्ना खुट्टाले जोडसँग हाँगालाई समाएको थियो । अर्कोतिर ढुकुरले गुँडलाई समायो । ढुकुरलाई हाँगामा अडिन नै समस्या परेको थियो ।
असिनाका दाना बर्सन थाले । ढुकुरले गुँडलाई छोपेर बस्यो । असिनाका दानाले उसको शरीर दुख्न थाल्यो । तर पनि उसले गुँड छोडेन । एकछिनमा हावा र असिना दुवै रोकियो ।ढुकुरले कागलाई ठुँग्न खोज्यो । उसले भन्यो, ‘काग दाइ, अब तिमी यहाँबाट जाऊ । तिमीले मेरा अण्डामा आँखा गाड्छौ । यसपालि मैले जसरी पनि बच्चा निकाल्नुपर्छ ।’ कागले ढुकुरका कुरा चुप लागेर सुनिरहेको थियो । तर ऊ त्यहाँबाट गएको चाहिँ थिएन । यत्तिकैमा कागले रूखको हाँगातर्फ एउटा सर्प आउँदै गरेको देख्यो । उसले ढुकुरलाई केही पनि भनेन । उसले आफ्नो चुच्चाले सर्पलाई समाएर तल पोखरीमा फयाँकिदियो । बल्ल ढुकुरले कागको सहयोग राम्रोसँग देख्यो । सर्प पोखरीमा पौडेर भाग्दै थियो । यो दृश्य ढुकुरले देखिरहेको थियो ।
ढुकुरको गुँड र अण्डा सुरक्षित नै रहे । ढुकुरले कागतिर हेर्दै भन्यो, ‘जीवनमा समस्या धेरै आउँदा रहेछन् । तर समस्यासँग भाग्नु हुँदैन रहेछ । संघर्ष गरेकै जीवन सफल हुने रहेछ ।’ कागले टाउको मात्र हल्लायो, तर केही बोलेन । ढुकुरले कागलाई धेरै धन्यवाद दियो । कागलाई आफ्नो सच्चा मित्रका रूपमा पाउँदा ऊ खुसी भयो ।
प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०८:१७